Modern, ogcwele kakhulu ngempela ukucindezeleka ekuphileni futhi izingxabano ngokuvamile iphula noma inkimbinkimbi ubuhlobo obuseduze. Isisombululo namanzi ngakho nezinkinga likhona ingatholakala nokudla okuthile futhi amafutha, okuyinto afakiwe ohlwini aphrodisiacs. Zonke lezi zinto zihlukaniswe luyingxenye kwabesifazane nabesilisa. Ngakho-ke, ukusebenzisa awowonke akanangqondo. Namuhla sibheka aphrodisiacs eqinile imikhiqizo amadoda. Uhlu ukudla okunempilo uzokunakekela.
aphrodisiacs zemvelo zabesilisa zishukumisa kabuthaka nangokuthula ngokushelela nokulawula uhlelo zokuzala. Ngoba ukuvuselelwa ukuzwa nasekutholeni esiyindilinga entsha yokuphila ucansi kufanele kufakwe ekudleni ukudla okunothe ngamavithamini A, B1, E kanye C. Ukuze uzwisise, kulokho imikhiqizo babe aphrodisiac ngoba amadoda, kubalulekile ukuba bayihlole kabusha etafuleni ukudla bese ukhetha leyo qualitatively kuthinte libido besilisa .
Oyster - umthombo inimitable zinc zemvelo, ekhuthaza ukukhiqiza testosterone enempilo futhi ngcono isimo jikelele uhlelo zokuzala labafana. inhlanzi oily kuyafana - umhlinzeki elimangalisayo selenium emzimbeni wesilisa, okuyinto kubangela isidoda ukuhambisa ngokushesha. imbewu coriander kanye sunflower solar ukunikeza umzimba nge amavithamini B1, ukungabi noma ukushoda okuba nomthelela omubi ukwakhiwa.
Rosehip and ezisawolintshi - abameleli zemvelo Vitamin C, othinta zamagama hormone ocansini, futhi umsebenzi ke zokuzala. izinhlayiya Elimnandi, ikakhulukazi ezisawolintshi - i ekahle umfutho isifiso sobulili. Dinner, zigcwale iphunga kujabulisa ukunikeza leyo njabulo kobusuku lusondela.
Aphrodisiacs ngoba amadoda emikhiqizweni ukudla kwansuku ungumhleli ikhambi ekahle hhayi nje ngobe kutawutfutfukisa Luhambo yokuqothulwa, kodwa futhi ukuthuthukisa Ukwanelisa inkanuko, okuyinto ke kuholela khathizwe entsha ubuhlobo. Umthetho esemqoka ye imikhuba yobulili imenyu ezihlukahlukene futhi ukujula ukudla wakhonza. Attractive ukubukeka izitsha - isignali yokuqala libido wesilisa, ngakho umdlalo kuwufanele kuye.
Imifino kanye nezinongo
Garlic Elimnandi iqukethe Activator izingxenye ezithile zobuchopho. Lo mkhiqizo onion yenkampani ngokuphelele kuholela evamile wesilisa hormone okuthiwa i ibhalansi.
Isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi iqukethe hhayi kuphela omningi androsterone --amplifier ye potency, kodwa futhi ine impahla eyengeziwe futhi ngempumelelo ukuthi ukushiya umzimba ngokusebenzisa umjuluko, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi kuthinta abesifazane ukuhogela i-pheromone mnandi. Ngakho, i-zemifino "ejenti" Inani double.
Manje ake sixoxe lapho kukhona aphrodisiacs imikhiqizo amadoda. Bona ingatholakala izinongo - cardamom Ukuthoma, usinamoni, anise kanye ukukhiqizwa enhle kuphakamisa i-hormone efanele. A Verbena eyimfihlakalo kanye bergamot baqinise uthando, futhi okubaluleke - ugqozi lobusuku romantic. Lavender, nakuba kubhekwa isitshalo ngemiphumela eziphumulele, namanje ekujabulisayo le libido besilisa njenge akukho okunye.
Uma thina ukuchaza aphrodisiacs enamandla kakhulu imikhiqizo amadoda, qiniseka ukukhumbula lesi sidlo njengoju lwezinyosi futhi ginseng impande. Uju emangalisayo kwandisa potency, futhi sikanye zikaphayini nuts kudala izimangaliso engakholekile besilisa uhlelo ngokobulili. Ginseng futhi - Bioactivator indinganiso ephakeme, tincture yayo qualitatively ngcono igazi ligeleze zangasese kokubili amadoda nabesifazane ukuthi kuthinta ucansi kumnandi.
Khulisa ukukhiqizwa kwe-testosterone edingekayo ukuze sisize amantshu amaqanda, futhi sikanye abasha parsley namanzi futhi dill zishukumisa zigcine kufihlwe iningi libido besilisa. Parsley uyazifihla apigenin, okuyinto ngomusa upholisa hormone zesifazane emzimbeni wesilisa asebenzayo. Dill futhi aqikelele ukuthi futhi ngobumnene dilates yegazi umphumela ekwelapheni ohlelweni zokuzala.
Ayikho ayisasebenzi Activator isifiso sobulili yisona ginger ukufudumala, esiza ukuba sibhekane ngokuphumelelayo cholesterol (inkathazo umsebenzi wocansi), futhi wegazi.
"Ejenti" uyatetema isimo jikelele hormone ngeke izigwaca amaqanda. Lokhu aphrodisiac enkulu kufanele ibukeke. Izigwaca amaprotheni Ukusheshisa uhlelo igazi.
Eminye imikhiqizo ewusizo
A win win aphrodisiac babe truffle ehlanzekile morels. Lezi izinhlobonhlobo amakhowe - Activator omuhle kakhulu inkanuko. Casanova yena njalo aphathwe kuya nokunqoba okukhazimulayo morels in the imibhede emakhosazaneni zasebukhosini.
kwasolwandle eminingi nedumela lokuba a aphrodisiac enamandla amadoda. Ngakho-ke, isinqumo ngesakho. Ngemva aphrodisiacs inganotsiswa, hhayi kuphela izingilazi shellfish, kodwa futhi caviar qualitative abakhethayo (obomvu, omnyama). Hlanganisa Activator okubabayo ngakho futhi elicwengekile libido imele nge zasemazweni aluhlaza futhi iwayini ukukhanya.
Walnuts (omisiwe kahle), amantongomane - Viagra ngokwemvelo umzimba besilisa. Qaphela ukuthi Activator ngokucophelela ngakho isifiso sobulili emhlabeni alusekho. Ngenxa ukugcwaliswa amavithamini namaminerali abalulekile, amantongomane neqhaza ekukhiqizeni testosterone.
amakhiwane ezingavamile emangalisayo elimnandi kubuye kusize ekunikeleni isebenze libido besilisa. An izithelo okhuthele namaminerali ngokugcwele ifomu fresh noma ngesimo isinongo omisiwe. umlingani wakhe kuyoba izinsuku amnandi. Bona kwandisa potency nge njalo, kodwa ukusetshenziswa alinganisiwe.
ukwatapheya Finest ngozwelo ematisa izitsha-mpilo ezidingekayo futhi acid okunamafutha okuqinisa futhi ubuyisela operation evamile izitsha. Imbewu Sesame elimnandi - futhi kufihlwe aphrodisiacs abobulili namandla.
Aphrodisiacs imikhiqizo amadoda: zokupheka potency
Salad ngesisekelo sesame noma i-arugula esihambisana zikaphayini nuts - a Activator emangalisayo hhayi kuphela ukusondelana kodwa futhi engxoxweni romantic phambi kwakhe.
Ayikho activators kancane abaphumelelayo libido kanye sesivuthiwe ubhanana besilisa. Lezi izithelo ezinhle futhi okunoshukela ocebile bromelain, ulawula ngokuphelele emkhakheni ngokocansi, kanye potassium ne kubalulekile B amavithamini
Sweet aphrodisiac futhi babe ushokoledi (izinga ikakhulukazi abamnyama) kanye marzipan (alimondi unama, zemvelo). Popular strawberry, wathela ungqimba elinomusa ushokoledi elicibilikile, evulekile phezulu engaziwa isifiso sobulili.
Ngokuphelele kuhlanganiswe nomunye aphrodisiacs ngenxa yabesilisa imikhiqizo elula kakhulu futhi ezingabizi. Salad of bobusha onion eluhlaza, ambalwa (inkukhu noma izigwaca) amaqanda sikanye spoon zamafutha omnqumo - isidlo ephelele equkethe amaningi njengoba ezintathu aphrodisiac asebenzayo.
iminqumo Italian futhi omnyama tribeswoman Maslinka - umphelelisi ephelele kuze isiphuzo esigeza inhliziyo noma salads. Hhayi lutho ngoba amaNtaliyane abadumile njengoba isoka esihle ezimkhanukelayo. Elements eziqukethwe iminqumo, umphumela enhle ukugeleza kwegazi futhi jikelele isimo hormone. Ngakho afrodizika obucayi emhlabeni ukuthola.
Ngaphezu kwalokho, kukhona aphrodisiacs ngenxa yabesilisa imikhiqizo zikhona, futhi iziphuzo. iwayini mulled - ephelele "ejenti" mission okwandayo isifiso sobulili. Hot Ukuthoma iwayini elixutshwe coriander, usinamoni vanilla enongiwe - kuba isiphuzo isimangaliso besilisa uhlelo ngokobulili.
Njengoba isifiso yokukhulisa umsindo usebenze: anisette, Liquors elimnandi, i-tequila ezingavamile, rum zasendle. Umthetho eyinhloko umdlalo ne iziphuzo kuyinto Isikali ecacile, utshwala ngokweqile kungabangela imiphumela kwezidakamizwa.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi lokho aphrodisiacs enamandla amadoda Sihlala imikhiqizo. Uhlu ukudla sinikeza kuwe. Sithemba ukuthi ungenza ngokwakho imenyu egcwele lobusuku romantic.
Kanjani ukwakha ubuhlobo umndeni ngemuva kwengxabano?